काठमाडौं, २६ असार –
पैसाले सबथोक आउँछ भने माया किनी ल्याउनू
पैसाले यदि शान्ति मिल्दछ भने उद्यान के धाउनु
कवि सुदेश सत्यालले आफ्ना कविताका यी श्लोक वाचन गर्दा हलभरि ताली बजिरह्यो । कार्यक्रममा सत्यालकै कविता सुन्नकै लागि भनेर एक हुल युवापुस्ता कार्यक्रममा उपस्थित भएका थिए ।
आइतवार शताब्दी साहित्य प्रतिष्ठानले २ सय ४ औं भानु जयन्तीको अवसरमा आयोजना गरेको ‘आठ कविका चौबीस कविता’ कार्यक्रममा आठ कविले आफ्ना छन्दोबद्ध कविता सुनाइरहँदा दर्शकले कार्यक्रमको अन्तिमसम्म साथ दिए ।
केही समयअघिसम्म छन्द कवितालाई गद्य कविताले ओझेलमा पारेपनि अहिले भने छन्द कविता र कवि पनि जुर्मुराएको पाइन्छ । आठ युवाकविले विभिन्न छन्दमा रचेका आफ्ना कविता सुनाउँदा कविता सुन्न आएका दर्शक बेलाबेलामा मन्त्रमुग्ध देखिन्थे । कविले आफ्ना कवितामार्फत नेपाली सीमा, राष्ट्रियता, प्रकृति, आमा, समाज लगायतका विषयवस्तु उठान गरेका थिए । शृंगारका विषयमा कमै कविता वाचन गरिए ।
न्यानो काख थियो सुरक्षित जहाँ संसारभन्दा पर
रित्तो आँगनले निःशून्य छ भन्ने आमाविनाको घर
चौतारी पनि आँसु झार्दछ शमी डाक्दैछ आऊ भनी
कोइली रुन्छ कुहुकुहु विरहमा आमा कहाँ छौ तिमी
कवि प्रदीप खद्योतले आफ्ना कवितामार्फत देशप्रेमका साथै आमाको महिमालाई चित्रण गरेका थिए । ‘नेपाल मेरो घर’ शीर्षकको शार्दूलविक्रीडित छन्दमा लेखिएको उनको कवितामा नेपालको सुन्दर पक्षको वर्णन गरिएको थियो । त्यस्तै उनले आफ्ना अन्य कवितामा आमाप्रतिको स्नेह र देशप्रेमलाई पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यस्तै कवयित्री प्रेक्षा लम्सालले आफ्ना कवितालाई गीती भाकामा सुनाइन् । उनको वाचनशैलीले धेरैको ध्यान खिचेको थियो । उनले शार्दूलविक्रीडित छन्दमा ‘के छैन नेपालमा’ शीर्षकको कवितामार्फत नेपालको प्रकृति र सम्भावनाको पनि वर्णन गरेकी थिइन् ।
हे आमा ! अति खुशी मिल्छ मनमा जन्माएछौ स्वर्गमा
स्वर्गैको रूप ढल्किने गुण छ यो के छैन नेपालमा ?
उनले आफ्ना अन्य दुई कवितामार्फत पनि राष्ट्रभावलाई प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले शिखरिणी छन्दमा सुनाएको कविताले पनि दर्शकको मन जितेको थियो । त्यस्तै अर्का युवा कवि दीपेन्द्र उपाध्यायले तीन कवितामध्ये पहिले ‘ईश्वरलाई प्रश्न’ शीर्षकको कविता सुनाएका थिए । अनुष्टुप् छन्दको उक्त कवितामा उनले समाजमा देखिएका कमजोर पक्षलाई उठान गर्दै कवितामार्फत ईश्वरलाई प्रश्न सोधेका थिए ।
कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा उपस्थित वरिष्ठ साहित्यकार डा. नवराज लम्साल, डा. देवी नेपाल, डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र भुवनहरि सिग्देलले पनि आफ्ना छन्द कविता सुनाएका थिए । युवाकविलाई भोलिका दिनमा ‘मैले केही कविता लेखें भन्दैमा अहंभाव नपलाओस्’ भन्ने सुझाव पनि दिएका थिए उनीहरूले ।
‘साहित्य सृजना सामान्य विषय होइन, हामी अमर हुने बाटोमा छौं,’ कविता वाचन गरेका कविलाई इंगित गर्दै डा. देवी नेपालले भने, ‘हिजो प्रधानमन्त्री भएका केपी ओलीलाई हामी पूर्वप्रधानमन्त्री भन्छौं, तर २०४ वर्ष पुराना भानुभक्तलाई हामीले भूतपूर्व कवि भन्दैनौं ।’
उनको भनाइप्रति दर्शक, कविप्रेमी तथा कविले ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए ।
अर्की कवयित्री संगीता खत्रीले आफ्नो कवितामार्फत राष्ट्रिय भावनालाई प्रस्तुत गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा शर्मिला गिरीले पनि आफ्ना कविता वाचन गरेकी थिइन् । उनले पनि आफ्ना कवितामा देशप्रतिको भावनालाई उठान गरेकी थिइन् ।
कार्यक्रममा सुनिता सापकोटाले पनि आफ्ना कविता वाचन गरेकी थिइन् । अर्की कवि उर्मिला कोइरालाले पनि आफ्ना कविता सुनाएकी थिइन् । उनले कार्यक्रममा आफ्नो शिखरिणी छन्दको कविता सुनाएकी थिइन् ।
लेखनका दृष्टिले सूत्रबद्ध गरेर लेख्नुपर्ने भएकाले पनि युवापुस्ता छन्द कवितातर्फ आकर्षित भएको पाइँदैन । पछिल्लो समयमा भने छन्द कविताको बजार बिस्तारै स्थूल बन्दै गएको सञ्चारकर्मी, गीतकार तथा साहित्यकार नवराज लम्सालले बताए ।
‘कविता मुटु हो । सामान्य साधनाले म कवि बन्छु भन्ने नसोच्नुहोला’, लम्सालले कार्यक्रममा उपस्थित दर्शकलाई समेत आग्रह गर्दै भने ।
कार्यक्रममा युवाकविका कविताले दर्शकको मन जितेको थियो । महिलाको मात्र नेतृत्व रहेको शताब्दी साहित्य प्रतिष्ठानले यस्तोखाले कार्यक्रमको आयोजना गरेकोमा कविहरूले धन्यवाद समेत व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सुदेश सत्यालले वाचन गरेको ‘फर्केर आऊ घर’ शीर्षकको कविताः
पैसाले यदि शान्ति मिल्दछ भने उद्यान के धाउनु ?
थाहा नै समुद्रपारितिरको त्यो देश कस्तो छ र ?
यो सानो झुपडी बुझे महल हो, फर्केर आऊ घर ।
मान्छे आज विदेशको झिलीमिली देखी रमाए पनि
आमाकै प्रिय हुन्छ काख हुन्छ जहिल्यै, लाखै कमाए पनि ।।
जाँदैछौ पुतली समान नभमा उड्दै कहाँ हो पर
आफ्नै देश सिंगार्नुपर्दछ यहाँ फर्केर आऊ घर ।
बाँझो खेत जताततैतिर भए के काम खोज्छौ भन
नेपाली हुनुमा गौरव छ स्वयं के नाम खोज्छौ भन ।।
हो तिम्रै श्रमले फुलाउनप–यो यो सृजना सुन्दर
फुट्छन् मूल यही फुटाउन सके फर्केर आऊ घर ।
बस्दाखेरी यही गुराँस जसरी मुस्कान साँचिन्न र ?
चाहे खान परोस् न गुन्द्रुक ढिँडो खाएर बाँचिन्न र ?
अर्को सुन्दर देश छ खै कहाँ यो भूमिभन्दा पर
रित्तो आँगनको तिमी मखमली फर्केर आऊ घर ।
खुल्छन् गुप्त कुरा विदेशतिरका ढोका चियाएपछि
के फल्दैन हुँदैन के दशवटा नङ्ग्रा खियाएपछि ।।
असार २६, २०७४ मा प्रकाशित